Ejiji pụtara ótú ndi si eke ekike, ihe ha na eyi n'ahụ nakwa oge ha ji eyi ha. Ejiji bụ ejula kpụrụ, ọ kpụrụ okukoro ya, ma bụrụkwa njirimara ndi n'ebe e nwere ụbara ndi.
Dịka ọ bụ ihe a ma ama na ọkwa mba na-achị n'olu n'olu, ndi ọbụla nwere ejiji nke ha, bụ nke nwere ihe ndi iche n'ụzọ pụtara ihe n'ebe nke ndi ọzọ dị.
Ejiji bụ aha e ji ama onye bụ onye n'ụwa ndi ntị ochi, maka na onye yiri nke ya pụta, ihe oyi n'ahụ akọwaa ebe o si.
Agbụrụ dị iche iche dịka Igbo, Awụsa, Yoruba, Ịjọ, tinyere ndi ọzọ, nwegbadoro ejiji nke ha, ma bụrụkwa nke ha ji eme ngala ma na-egosipụtakwa mma ha.
N'ala Igbo, ejiji so n'otu n'ime omenala ndi Igbo, ma bụrụ nke dịbara gboo. N'oge gboo ahụ n'ala Igbo, e nwere ụdị ejiji dị iche iche ndi Igbo na-eji; ejiji ọbụla nwekwara ebụmnobi, nwee oge, nwee nsọpụrụ ma nwekwa ndi e mebeere ya.
N'oge ahụ, na onye nna ya bi n'ala eze anaghị eje ọkụ mmụọ, abụghị n'ebe ejiji ndi Igbo dị, maka na okoro erughị eru wara ọgọdọ, ikuku buo, o buru ya na ọgọdọ ya.
Nwata echighị ọzọ n'ala Igbo n'oge ahụ apụghị iji ejiji ndi chiri ọzọ maka na aka kpata ezeku udele, ọ kọọ mmụọ chibere ya ọzọ. Ọzọkwa, ọ bụrụgodi na nna nwata ahụ chiri ọzọ, ya bụ nwata apụghị ikpuru ọbụnadị okpu ndi ọzọ pụta iro maka na isi ya agaghị ebunwu ihe ọ ga-ekote.
Ihe ndi ọzọ pụtakarịchakwara ihe n'ejiji ndi Igbo n'oge mbụ bụ na ndi ọbụla -- ndi egwu, ndi na-eru uju, ndi echichi, ụmụ ntakịrị, ụmụ aghọghọ, ụmụ ntorobịa, ndi iyom na ndi ikom nwagbadoro ejiji nke ha. Ọbụnadị ndi ara nwekwazịrị ejiji nke ha; ma ndi ara pụrụ ọhụụ ma ndi nke ha gbagoro ahọ. Ihe ndi a niile bụ oge elu bụ ala ọsa, na oge egwu dị mmadụ n'anya.
Mana ugbu a, ihe aghasasịana; égwú adagharịgokwa maka na égwù na ihere apụọna mmadụ n'anya. Ọtụtụ ndi Igbo amaghịzịkwa nke bụ ejiji ndi Igbo, ma ya fọdụzie ịghọta uru akpa agwụ baara eze dibịa.
Ugbu a bụzịkwa oge ị ga-ahụ agadi nwaanyị mụkacharana ụmụ, o kee ekike ka ụmụ agbọghọ, ma hụzịkwa nnukwu nwa agbọghọ nne ya zụchaarala kpọba n'ahịa, o kee ekike ka ụmụ ntakịrị, ghebesie ụmụ ebe dị añaa oghe, ma na-agara onwe ya ije nwa buusu, ka a ga asị na anya kpọsịrị ụmụnna ya.
Onweghịkwa ihe ha jiri akụkụ ahụ ha dị añaa wee kpọrọ maka na ha na-agbazị ihe niile na-anwụ, ebe ọtụtụ n'ime ha na-akpachapụzị anya ga zụrụ akwa nwa a mụrụ ọhụụ, na-eyiri onwe ha; nke mezịrị ka ọnụ ahịa akwa ụmụ ntakịrị gbagoo n'ike.
Ha yirizie ya pụta ebe ndi mmadụ juru, ha amalite ịdọ ya aka ka o too ogologo mberede wee kpuchie ọtọ ha, ka a ga-asị na ọ bụ n'ebe ahụ ka ha nọrọ wee too ogologo nke ha.
Ụfọdụ ụmụ agbọghọ na ndi nne mụkachaarana ụmụ na-eyizịkwa 'awantịịrọ' na àrụngé apụta iro, ọtụtụ anaghịzịkwa eyi ọpanté, ebe ụfọdụ sịkwa na ọ bụ ịgba ọtọ ma ọ bụ iyi akwa ụmụ nwoke kaara ha mma.
Ugbu a, onye kwadochaa, ọ ga-akwụnyerịrị ntutu atụrụ n'anya, kwụnye mbọ agụ n'aka na ọkpa, tee nke otite n'anya ma n'ọnụ wee dịzie ka nwa nkịta a zụrụ ọhụụ, tupuu ị mara na ọ kwadochaana. Ugbu a bụzịkwa oge nwa agbọghọ na-agba ọtọ ma ọ bụ yiri mbenukwu bịa ụka, ga nọrọ n'ihu oche, ka a mara na ụkọchukwu o sikwara ike n'okwukwe, ka ọ ga-adabà.
Ọbụnadị ụmụ nwoke anaghịzị ekwe mmadụ mara ndi isi dị mma na ndi ara pụrụ ọhụụ, site n'ụdị ejiji ha na-eji. Ha sịzịkwa na ị ga -eyirịrị akwa mere ndọkasị ma kpụdebe ya na mpupè ikè, ka a ga-asị na ọ na-agbụ gị agbụ, tupu a mara na i so n'ihe a na-eme. Ụfọdụ na-ama ụma ga zụrụ akwa dị mma, ma were aka ha bekasịa ya ma ọ bụ tụpusie ya, tupuu haa amalite iyi ya. Ndi be anyị, onye tara ụnụ amosu a?
Ọtụtụ ụmụ nwoke na-akpakwuzị isi ha akpa, na-agba ọlà nti, ma buru ihe ndi a na-aga ụlọ ụka, ụlọ akwụkwọ, na ebe dị iche ha na-aga, ka a ga-asị na ha bụ akwụlakwụla na-achọ onye ga-atụnyere ya, ma ọ bụ na chi kere ha dị nzuzu wee ghara ike ha ka bụrụ nwaanyị. Ị hụzie ha n'etiti ụmụ agbọghọ, ị gaghị amazị onye bụ onye.
Gịnị mere na anyị achọghị ịghọta na ejiji anyị bụ úkô anyị na njiri mara anyị?
Anyị wee chezọọ ihe ndi a, sị na ọ bụ iji ejiji ndi mba ọzọ, na-eduba n'ịghọ ahịa kaara anyị mma.
Onye sị ka a kpụọ ya isi a kpụrụ nwa mgbeke, ọ makwa na isi ya na nwa mgbeke abụghị otu?
Ka anyị echezọọna na ọ bụ ezie na anụ yiri onwe ha, mana nke ọbụla nwere ihe ọ na-asọ, na ihe ọ na-eri?
Ka anyị laghachinụ azụ, ndi be anyị, n'ezi ejiji e jiri mara ndi Igbo; ka anyị kwụsị ịgba ọtọ, ma kwụsịlata itekọsị ihe ntekọsị na ịkwụnyesi ihe nkwụnye ndi a anyị na-akwụnyesi n'akụkụ ahụ dị iche, bụ nke na-enweghị uru ọbụla ọ ga-abara anyị, karịa iri anyị ego, iduba n'ọnwụnwa, mgbenye, ịma n'ọnya, nakwa n'ịla n'iyi dị iche iche.
Nchọpụta na-egosi na ụmụ nwaanyị, ọkachasị ụmụ agbọghọ na-atụfu ihe karịrị pacent iri asatọ nke ego ọbụla na-bata ha aka n'ihe a na-eyi eyi, ihe a na-ete ete na ihe ndi ọzọ ha na-akwụnyesi n'ahụ
Nke ahụ wee bụrụ ebe ego ha na-ala.
Ya bụ, ka anyị were ire anyị gụọ eze anyị ọnụ, mara na onweghị ebe ụmụ ihe ndi a bu anyị eje, ma laghachikwa azụ n'ebe anyị si pụta.
Ụbọchị Mọnde gara ka e mere mmemme icheta ụbọchị ejiji na mba ụwa. Gịnị ka ndị Igbo nwere igosi n'ụbọchị taa dịka ejiji ha pụrụ iche?
A sịgodi na ọ bụghị ịwa akwa ọwụwa dịka e si awa n'oge mbụ, onye ọbụla (nne, nna, agbọghọ, okorobịa, ụmụ aka na ndi echichi) kwesiri ịma ihe ọ ga-eyi, ma kee ekike dịka onye ọ bụ, kpuchiekwa ọtọ ya, maka na onye rere ọtọ ya erego ugwu ya.
Ugbu a ka bụ gboo ndi be anyị, echi pụrụ ịdị anya.
Ka anyị chighaanụ azụ n'ebe anyị si, ndi be anyị.
Onye a gwara nụ, a hụ ọzọ, a gwakwa ya.